Nisy Sivily Ampolony Maty Ve Tamin’ny Fanafihana an’Habakabaka Tetikady Vaovaon’i Trump ao Afghanistan? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2017 14:00 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Português, Español, 日本語, فارسی, English
Nahafatesana sivily miisa 15 ny daroka baomba iray tamin'ny 28 Aogositra nafantoka tamin'ny mpitolona mitam-piadiana tao amin'ny faritra Zir-e Koh andrefan'ny faritanin'i Herat, araka ny tatitra nataon'ny Iraka Fanampian'ny Firenena Mikambana ao Afghanistan (UNAMA). Tatitra tsy ofisialy no milaza fa 20 na mihoatra ny isan'ny sivily maty tamin'ny fanafihana. Roa andro taorian'izany, nisy fanafihana niarahan'ny tafika Afghan sy Amerikana natao tamin'ny Taliban nahafaty sivily 11 sy nandratra 16 hafa tao amin'ny distrikan'i Pol-e Alam tao amin'ny faritay antsimo ao Logar.
Niteraka fahatezerana tao Afghanistan ny fanafihana ary niteraka ahiahy amin'ny tetikady vaovaon'ny filohan'i Etazonia Donald Trump momba an'i Afghanistan izay toa tahaka ny hampitombo ny isan'ny fanafihana ny toerana misy ireo mpitolona mitam-piadiana raha mampihena araka izay tratra ny risika mety hahazo ireo miaramilan'i Etazonia.
Nanapoaka ny fandarohana baomba an'habakabaka tamin'ny tsanganana iray i Sardar Hussain Bakhtari, Afghan mpisera Facebook iray:
Hatramin'izao ny ady amin'ny tolona mitam-piadiana ao Afghanistan dia mbola manahiran-kevitra ny Vaomiera Mahaleotena Afghan Misahana ny Zon'Olombelona (AIHRC) sy ny Firenena Mikambana izay samy nanameloka ny fahamaroan'ny sivily maty. Nandrakitra ny UNAMA fa niakatra 43 isanjato ny sivily voa nateraky ny hetsika an'habakabaka tao Afghanistan nandritra ny enimbolana voalohany amin'ny taona 2017.
Ny paikadin'i Etazonia vaovao hiadiana amin'ny fampihorohoroana ao Afghanistan dia mifantoka amin'ny fanohanana an'habakabaka ataon'ny vondro-tafika Amerikana amin'ny Herim-Piarovam-Pirenena sy Filaminana Afghan (ANDSF). Araka ny tatitra nataon'ny Reuters, nanomboka tamin'ny fotoana nandraisan'i Trump ny asa tamin'ny Janoary 2017 ka hatramin'ny 20 Aogositra, dia efa nisy 2244 ny isan'ny fanafihana an'habakabaka, ambonin'ny daroka miisa 1074 nandritra ny taona 2016 iray manontolo.
Araka ny paikadin'i Etazonia vaovao, vondrona efatra samihafa no lasibatr'izany fanafihana izany: ny Taliban, ny Tambajotra Haqqani, Ny Faritany Islamika Khorasan (IS-KP), ary ny al-Qaeda.
Tamin'ny volana novambra tamin'ny herintaona, nahafaty sivily 30 sy naharatra olona 25 ny fanafihana an'habakabaka ataon'i Etazonia tany amin'ny faritany avaratra ao Kunduz, izay niteraka fahatezerana tao Afghanistan. Herintaona talohan'izany, nalaza ratsy ho nahavoa hopitaly iray itsaboan'ny Medecins Sans Frontieres (MSF) tao amin'io faritany io ihany, ka nahafaty sivily 42, ahitana marary sy mpitsabo tao amin'ny Foiben'ny Fitsaboana Takaitra ao amin'ny Hopitaly, ny daroka an'habakabaka nataon'ny tafik'i Etazonia.
Tao anatin'ny 12 taona voalohany nananihan'i Washington ny firenena, farafahakeliny mariazy valo no nodarohan'ny miaramilan'i Etazonia baomba. Aorian'ny fandarohana baomba tahaka izany no ilazan'ny mponina malahelo sy tezitra fa fanahy iniana mihitsy ilay fanafihana.
Saingy araka ny fandehan'ny fotoana, very tao amin'ny “fo sy sain'ny” Afghan ny fanjerana baomba amin'ny alalan'ny fiaramanidina mahafaty sivily izay lazain’i Washington ho itolomany.